Aguero oo qof kasta kaga yaabsaday xidiga uu kaga dayan jiray kubadda cagta caruurnimadiisa – Gool FM
Aguero oo qof kasta kaga yaabsaday xidiga uu kaga dayan jiray kubadda cagta caruurnimadiisa
(Manchester) 14 Sab 2018. Sergio Aguero ayaa ka hadlay waayihiisa caruurnimo, gaar ahaan bilawga xirfadiisa ciyaareed ee kooxda Independiente ee dalka Argantina, kahor inta uusan qeyb kasoo noqnin kubada cagta ee qaarada yurub.
“Waxaan jeclaa daawashada horyaalka Premier League waayahayga caruurnimo, waxaan taageera u ahaa kooxda Liverpool, sababtoo ah waxay xirnaayeen isla maaliyada sida Independiente”.
“Xidiga aan kaga dayan jiray xiligaas kubada cagta wuxuu ahaa Michael Owen, wuxuu ahaa mid aad u dhaqso badan isla markaana dhaliya goolal badan, waqtigaasna waxaan go’aansaday inaan weeraryahan noqdo”.
Waxaa xusid mudan in Sergio Aguero uu ilaa iyo haatan kasoo dhaliyay Premier League 143, laakiin wuxuu wali ka fog yahay gooldhaliyaha ugu sareeya taariikhda horyaalka dalka England ee Alan Shearer kaasoo soo dhaliyay 260 gool.
“Aabahay wuxuu ku fashilmay inuu iga joojiyo cabista sigaarka muddo 20 sano ah”… Maurizio Sarri
DAAWO adigaa QOSLI doonee: Cristiano Ronaldo oo dhaa-dhaajinaya Wariye